I-Ultrasonically-assisted Ultrafiltration - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrafiltration (UF) ivame ukusetshenziswa embonini yobisi ukuze kuhlungwe amasondo.
Ultrasonically-basizwa izinqubo ultrafiltration ngcono ukusebenza kahle whey ukuhlukaniswa izinqubo ngesikhathi ultrafiltration whey izixazululo.
Hielscher Ultrasonics inikeza okukhethwa kukho okuhlukahlukene ukuhlanganisa amandla aphakeme ultrasonics zibe izinhlelo ultrafiltration.
I-Ultrasonic Membrane Filtration
Lapho i-ultrasonics enamandla isetshenziselwa uketshezi kanye nama-slurries, i-cavitation, ukuwa kwe-bubble kanye ne-micro-jets kuyenziwa. I-Hielscher Ultrasonics isebenzisa la maqhawe amakhulu e-ultrasonic ukuguqula uketshezi lwe-dynamics, amazinga okugeleza kanye nokuhamba ngezingqimba. I-filtration esebenzisa i-ultrasonically yezinhlayiyana eziphuma ezinkolweni ziza nezinzuzo ezihlukahlukene: Ukugeleza kwezinga ngokusebenzisa i-membrane yesihlungi kunganda kakhulu uma amandla e-ultrasonics asetshenziselwa eduze nesihlungi. Ngalokho, ukuhlunga kusebenza ngokuphumelelayo kakhulu. Izinzuzo ziyi-outputput ephakeme, ikhwalithi yomkhiqizo oqhubekayo nokuphila kwe-membrane enwetshiwe kusukela i-ultrasonics isusa ukuxubha kanye nokuvala.
Ukunciphisa i-ultrasonic viscosity kubangela kakhulu izinga lokugeleza eliphezulu. Izinzuzo ezengeziwe ziyi:
ukwandisa okukhipha ngo-10% noma ngaphezulu
ukunciphisa izindleko ezinkulu eziguquguqukayo neziguquguqukayo
kuncishiswe ukugcwalisa izindleko zokulahleka kanye nokwelashwa kwemfucuza
izidingo zokunciphisa ukunciphisa
ukutshalwa kwezimali okuphansi kanye nenzuzo eyanda
ukubuyisela emuva ngaphansi konyaka owodwa
I-Hielscher Ultrasonics inolwazi olujulile lokumisa nokufaka uhlelo olufanele lwe-ultrasonic ukuthuthukisa ukusebenza kahle nokukhipha kwe-spray-dryer yakho. Ngokusho komshini wokukhiqiza, i-Hielscher inikeza okukhethwa kukho okuhlukahlukene ukusebenzisa amandla amakhulu e-ultrasonics ekunciphiseni i-viscosity ukunciphisa amaprotheni izixazululo. Zonke izinhlelo zethu ze-ultrasonic zezimboni zakhiwa izinhlelo zokusebenza ezisindayo ngaphansi kwezimo ezidinga futhi zingasebenza 24/7. Ngenxa yonyawo lwazo oluncane, zingahle zilungiswe kabusha emigqeni yokukhiqiza ekhona. Ukugcinwa okuphansi nokusebenza komsebenzisi kuyizinzuzo ezengeziwe.
Thintana nathi namhlanje ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuthi indodanaication ithuthukisa kanjani inqubo yakho ye-ultrafiltration!
I-UIP2000hdT for ultrafiltration
D. Liu, E. Vorobiev, R. Savoire, J.-L. Lanoisellé (2013): Ucwaningo lokuqhathanisa lwe-ultrasound-eyasizwa futhi evamile evusa ukuphela kokufiphala kwe-grape pomace extracts. I-Ultrason. Sonochem. 20, 2013. 708-714.
Mayelana nezinqubo zokuhlunga
I-Sonication ingasetshenziswa ekusetshenzisweni kwe-microfiltration, ultrafiltration kanye ne-nanofiltration. Ukusetshenziswa kwe-ultrasonically kwe-membrane filtration kusetshenziswe ngempumelelo kwe-ultrafiltration ne-nanofiltration ekwenzeni imithi yamakhemikhali kanye nokukhiqiza imithi kanye nokudla nokukhipha isiphuzo. Ukuhlunga ubisi nobisi lwe-protein kungenye yezinhlelo zokusebenza ezibaluleke kakhulu ze-ultrasound filtration.
I-ultrafiltration inqubo yokuhlunga i-membrane, lapho ubisi lidlula khona ngendwangu encane, enesibindi ukuhlukanisa izingxenye zobisi ngokusho ngobukhulu bawo. Ukuze i-ultrafiltration, ukucindezelwa okuphakathi kusetshenzisiwe. I-Ultrafiltration ivumela i-lactose encane, amanzi, amaminerali, nama-molecule amavithamini ukuba adlule embranini, kuyilapho amaprotheni amakhulu namanqamuzana enamafutha agcinwa futhi agxila. Ukususwa kwamanzi ne-lactose kunciphisa ubisi obisi, futhi ngaleyo ndlela kunciphise izindleko zokuhamba nezokugcina. I-Ultrafiltration yenza ukhiqiza ukhiqize ngokwengeziwe. Embonini yobisi, i-ultrafiltration isetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-whey protein concentrate (WPC), ukugxiliswa kwe-protein yobisi (i-MPC), ukulungiswa kwamaprotheni we-cheese ubisi, ukunciphisa kwe-permeates kanye ne-lactose ukunciphisa ubisi.
I-Nanofiltration inqubo yokuhlunga kwe-membrane lapho uketshezi ludlula khona ulwelwesi olungaphansi luphakathi kuya kwengcindezelo ephezulu. Ama-membrane we-Nanofiltration anosayizi be-pore kusuka kuma-nanometers angama-1-10, amancane kunalawo asetshenziswa ku-microfiltration nase-ultrafiltration. Embonini yobisi, i-nanofiltration isetshenziselwa ikakhulukazi ukucwaswa (ngokwengxenye) kwe-Whey, ukukhipha i-lactose ukukhiqiza ubisi olungenayo i-lactose noma ukunciphisa inani le-Whey.